Sunday March 03, 2019 - 08:17:31 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wasaaradd keydka mareykanka ayaa sheegtay in Xamza uu halis ku yahay ammaanka muwaadiniinta mareykanka islamarkaana uu yahay shakhsi muhiim ah oo qeyb ka ah hoggaamiyaasha jihaadka caalamiga ah.
Washington ayaa sida caadadada u ahba waxay qofkii soo jaasuusa Xamza Bin Laden uballan qaadday lacag dhan hal milyan oo dollarka mareykanka ah, dhinaca kale dowladda Aala Sacuud ayaa sheegtay in dhalashadii ay kala noqotay Xamza oo qoyskiisu ay kasoo jeedaan dhulka xarameynka ee hadda aala sacuud ay xoogga ku heysato.
Aala Sacuud oo hoggaansamaysa amarka sayidkeeda Mareykanka ayaa iclaamisay in Sheekh Xamza ay ku dartay liiska waxa loogu yeero argagaxisada ayna kala noqotay dhalashada, Xamza ayaa tan iyo sanaddii 2015 wuxuu jeedinayay kalimado uu muslimiinta ku baraarujinayo beegsashada dowladdda mareykanka.
kalimaddiisi ugu dambeysay ayuu si aad ah ugu weeraray nidaamka dabadhilifka aala sacuud wuxuuna ugu baaqay muslimiinta dhulka jaziiradda carabta in ay ku biiraan Al Qaacidada Yemen.
Xamza Sheekh Osama oo kujira da'da sodomeeyada ayaa ka caraysiiyay reergalbeedka iyo dawaaqiidda waxayna ka baqayaan in uu buuxiyo booskii aabihii Sheekh Osama Bin Laden oo dib usoo cusboonaysiiyay jihaadka mucaasarka ah ka hor intii uusan ku shahiidin magaalada otabaad ee wadanka Pakistan sanaddii 2011